AHOANA NY FOMBA HAMAFANA NY FISIE FIZARANA LOZISIALY AMIN'NY WINDOWS 10 - MALEMY
Ahoana ny fomba hamafana ny fisie fizarana lozisialy amin'ny Windows 10
Inona ny fampirimana SoftwareDistribution ary ampiasaina amin'ny inona izany? Na dia maro aza ireo mpampiasa no tsy mahalala ity fampirimana ity, dia andao isika hanome fanazavana kely momba ny maha-zava-dehibe ny fampirimana SoftwareDistribution. Ity folder ity dia ampiasain'ny Windows hitahirizana vetivety ireo rakitra ilaina hametrahana ireo Fanavaozana Windows farany eo amin'ny fitaovanao.
Fanavaozana ny Windows dia zava-dehibe satria manome fanavaozana ny fiarovana & patch, manamboatra bug maro ary manatsara ny fahombiazan'ny rafitrao. Ny lahatahiry SoftwareDistribution dia hita ao amin'ny lahatahiry Windows ary tantanan'i WUAgent ( Windows Update Agent ).
Mihevitra ve ianao fa ilaina ny mamafa ny fampirimana? Amin'ny toe-javatra inona, no hofafanao ity fampirimana ity? Milamina ve ny mamafa ity folder ity? Ireto misy fanontaniana vitsivitsy izay sendra antsika rehetra rehefa niresaka momba io fampirimana io. Ao amin'ny rafitro, mandany mihoatra ny 1 GB ny kapila C izy.
Fa maninona ianao no hamafa ity folder ity?
Ny folder FolderDistribution dia tokony avela irery fa misy fotoana mety ilainao ny manadio ny atin'ny fisie ity. Tranga iray toy izany ny rehefa tsy afaka manavao ny Windows ianao na rehefa manavao na voatahiry ao anaty fampirimana SoftwareDistribution no simba na tsy feno.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, rehefa mijanona tsy mandeha amin'ny laoniny ao amin'ny fitaovanao ny Windows Update ary mahazo hafatra diso ianao dia mila esorinao ity folder ity mba hamahana ilay olana. Ankoatr'izay, raha hitanao fa manangona antontam-angon-drakitra misimisy kokoa amin'ny toerana misy ny kapila ity fampirimana ity dia azonao atao ny manadio ilay fampirimana hanafahana toerana malalaka amin'ny kapilao. Na izany aza, raha miatrika olana Windows Update toy ny Tsy mandeha ny Windows Update , Windows Updates tsy mahomby, Windows Update nikatona raha nisintona ireo fanavaozana farany , sns dia mila izany hamafa ny fampirimana SoftwareDistribution amin'ny Windows 10.
Azo antoka ve ny mamafa ny folder SoftwareDistribution?
Tsy mila hikasika an'ity fampirimana ity ianao amin'ny toe-javatra mahazatra rehetra, fa raha simba ny atin'ny fampirimana na tsy niraikitra ka miteraka olana amin'ny fanavaozana Windows dia mila mamafa izany fisie izany ianao. Azo antoka tanteraka ny mamafa io fampirimana io. Na izany aza, mila ataonao izay hahazoana antoka fa sendra olana amin'ny Windows Update ianao. Amin'ny manaraka rehefa vonona ny fisie Windows Update dia hamorona azy io avy hatrany i Windows ary hisintona ireo rakitra fanavaozana hatrany am-boalohany.
Fomba iray hafa hanafoanana ny FolderDistribution SoftwareDistribution
Ahoana ny fomba hanovana anarana ny folder SoftwareDistribution
Raha hamafa ny fampirimana SoftwareDistribution avy amin'ny fitaovanao dia mila manokatra ny Command Prompt na Windows PowerShell
1.Open Command Prompt na Windows PowerShell miaraka amin'ny fidiran'ny Administrator. mpanao gazety Kitendry Windows + X ary safidio ny safidy Command Prompt na PowerShell.
2.Raha misokatra ny PowerShell dia mila manoratra baiko voalaza etsy ambany ianao hampitsaharana ny serivisy fanavaozana Windows sy ny serivisy famindrana sary an-tsaina.
3. Ankehitriny dia mila mivezivezy ianao Folder fizarana SoftwareDistribution ao amin'ny C drive hamafana ny singa rehetra ao aminy:
Raha tsy afaka mamafa ny rakitra rehetra ianao satria misy rakitra ampiasaina, dia mila mamerina ny fitaovana fotsiny ianao. Rehefa miverina miverina ianao dia mila mihodina indray ireo baiko etsy ambony ary manaraka ny dingana. Ankehitriny, manandrama mamafa indray ny atiny rehetra ao amin'ilay fampirimana SoftwareDistribution.
4.Raha efa nofafanao ny atin'ny fampirimana SoftwareDistribution dia mila manoratra ity baiko manaraka ity ianao hampavitrika ireo serivisy mifandraika amin'ny Windows Update:
1. Kitiho ny Windows Key + R dia soraty services.msc ary tsindrio Enter.
2. Tsindrio havanana Serivisy fanavaozana Windows ary safidio Mijanòna.
3. Sokafy ny Explorer Explorer ary mizaha mankany amin'ireto toerana manaraka ireto:
Efatra. Fafao daholo ny fisie sy ny lahatahiry ao ambaniny RindrambaikoDistribution fampirimana.
5.Averina indray tsindrio havanana amin'ny Serivisy fanavaozana Windows avy eo misafidy Manomboha.
6. Ankehitriny mba hanandramana misintona ireo fanavaozana Windows ary amin'ity indray mitoraka ity dia tsy hisy olana izany.
Raha manahy ny amin'ny famafana ny fampirimana SoftwareDistribution ianao dia azonao atao ny manonona azy fotsiny ary mamorona automatique folder WindowsDistribution vaovao i Windows hampidina ireo fanavaozana Windows.
2. Ankehitriny soraty ireto baiko manaraka ireto hampiatoana ny Windows Update Services ary avy eo tsindrio Enter aorian'ny tsirairay:
3. Manaraka, soraty ity baiko manaraka ity hanovana anarana ny FolderDistribution an'ny lozisialy ary avy eo tsindrio Enter:
4. Farany, soraty ny baiko folowing hanombohana ny Serivisy fanavaozana Windows ary tsindrio Enter aorian'ny tsirairay:
Vantany vao nahavita ireo dingana ireo ianao, Windows 10 dia hamorona fampirimana ho azy ary hisintona ireo singa ilaina amin'ny fampandehanana serivisy Windows Update.
Raha tsy mandeha ilay dingana etsy ambony dia azonao atao izany ampidiro ao amin'ny Safe Mode ny Windows 10 , ary miova anarana RindrambaikoDistribution lahatahiry mankany amin'ny SoftwareDistribution.old.
Fanamarihana: Ny zavatra tokana mety ho very anao mandritra ny famafana ity folder ity dia ny fampahalalana ara-tantara. Ity folder ity dia mitahiry ihany koa ny mombamomba ny tantara momba ny Windows Update. Noho izany, ny fanesorana ny fampirimana dia hamafa ny angona momba ny tantara Windows Update ao amin'ny fitaovanao. Ankoatr'izay, ny fizotry ny Windows Update dia mila fotoana betsaka kokoa noho ny taloha kokoa satria WUAgent dia hanamarina sy hamorona ny mombamomba an'i Datastore .
Amin'ny ankapobeny, tsy misy olana mifandraika amin'ny fizotrany. Vidiny kely izany handoavana ny fanavaozana ny fitaovanao amin'ny Windows Update farany. Isaky ny mahita ny olana Windows Update toy ny fisie Windows Updates tsy hita ianao, tsy fanavaozana araka ny tokony ho izy dia azonao atao ny mifidy an'io fomba io hamerenana amin'ny laoniny ny fizotran'ny Windows Update.
Manantena aho fa nanampy ireo dingana etsy ambony ary afaka mora foana ianao izao Fafao ny fampirimana SoftwareDistribution amin'ny Windows 10, fa raha mbola manana fanontaniana momba an'ity fampianarana ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
tsy fifanarahana fomba fanonona olona
nikatona ny mpanampy ny fanavaozana ny windows 10
windows update nijanona 0%
windows 10 sisiny tsy mandeha